မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှသည် – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
October 28, 2008 by ကုမ်ရာသီသူ
ညီမငယ်လေး တစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ နာမည်ကတော့ ထနောင်းပေါ့။
သူ့ရဲ့ ဘ၀အပေါ်သဘောထားက ရှင်းတယ်ရှင့်။ လုပ်စရာရှိတာ၊ လုပ်သင့်တယ်လို့ သူကိုယ်တိုင်ခံယူတာကို လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားမှာပဲတဲ့၊ ကျန်တဲ့ ရလဒ်ဆိုတာက တခြား အခြေအနေတွေလည်း ရှိသေးတော့ လုပ်သလောက်မရလည်း ရသလောက်တော့ လုပ်နေမှာပဲတဲ့။ အဲဒီလို ရှင်းလင်းတဲ့ အတွေးအမြင်ရှိထားတဲ့ ညီမလေးဆိုတော့ သူ့ကို ဆုတောင်းပေးဖို့က ခပ်ခက်ခက်ပဲ။
“Happy Birthday!” လို့ ပြောတာကို ကျွန်မက မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ၊ ဒါမှမဟုတ်၊ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ လို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်ပါတယ်။ သူက ဘ၀ကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ ကြုံရသည်ဖြစ်စေ တတ်နိုင်သမျှ အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းလိုသူ၊ ဖြတ်သန်းဖို့ ကြိုးစားသူပါ။ အချိန်တိုင်း၊ အခြေအနေတိုင်း၊ အဖြစ်အပျက်တိုင်းကို မျှတတဲ့ သဘောထားလည်း ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ (ကျွန်မက စိတ်မရှည်ဘူးရှင့် 😦 )
ဒါက ကျွန်မတို့ရဲ့ စည်ကားတဲ့ မွေးနေ့အခမ်းအနားက မွေးနေ့ ကိတ်ကလေးပေါ့။
ဒီတော့ ကျွန်မက စိတ်ကို အေးအေးချမ်းချမ်းလေး ထားပြီး သူ့အတွက် ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ အချိန်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ ……………………..
ကဲ၊ ဒါပါပဲ ညီမလေးရေ။ အမက စကားပြော မပြေပြစ်တတ်လို့နော်။ လိုအင်ဆန္ဒတွေနဲ့ လိုအပ်မှုတွေကြားမှာ ခေါင်းနောက်ရတိုင်း အားပေးဖော်ညီမလေးအတွက်
This entry was posted in poem and tagged Birthday Present. Bookmark the permalink.
← လူမျောက်ဒုက္ခအပြီး တကယ်မျောက်ရဲ့ တကယ်ဒုက္ခ
မြန်မာကလေးများ၊ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် စကာင်္ပူ ကျောင်းများ-၁ →